Izindaba - Ukuhlaziywa kokusebenza kwemboni yezimoto ezincane nezimaphakathi eChina
Ibanga eliphansi neliphakathi le-silicon roll iron roll ebandayo bekungenye yezinto ezingavuthiwe eziphambili zamamotho amancane naphakathi nendawo.Futhi izindleko zibalelwa cishe ingxenye yesithathu.Ngalesi sizathu, ukuze kulawulwe izindleko, ezinye izimboni zezimoto ikakhulukazi izinkampani ezizimele zokukhiqiza, zithenga ikhoyili yensimbi ye-silicon egoqelwe ebandayo.
kwanqunywa kuphela usihlalo noma imenenja jikelele, ama-ejenti okuthenga avele enze imisebenzi yamaphepha.Abenzi bezinqubomgomo bagxilisa amehlo abo entengo yokuthenga, inani, izindleko zokuthutha, ukukhokhwa kwezimali, futhi kwasebenza kahle.
Okwesibili, izinga lemikhiqizo lafinyelelwa onjiniyela bomnyango wezobuchwepheshe, bese-ke;banquma ukusebenzisa amamaki kanye nemininingwane.Idinga abahlinzeki ukuthi banikeze iwaranti.Okokuqala hlola amapharamitha abalulekile wokungeniswa kukazibuthe, ukulahleka kwensimbi nokunye, futhi ungalokothi wenze amamaki aphansi esikhundleni saphezulu.
Qinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo, ukuze uthole kusukela ebangeni eliphansi le-silicon steelcoil enhle egoqiwe ebandayo ukuthi yini eyenza kangcono ekungeniseni kazibuthe, ukulahlekelwa kwensimbi.Ekuthengeni, inkomba yekhwalithi ingcono kakhulu engu-800 esikhundleni sama-600, enezinga elingu-600 lenye inkomba yekhwalithi ku-470 efinyelelwe. 470. Uma kufika amazinga ngemva kokuqhathanisa ukuhlolwa (kuhlanganise nokuhlolwa komshini), sizochibiyela imidwebo.Le ndlela idlala indima ebalulekile ekwehliseni izindleko (Intengo ehlukile icishe ilingane nama-yuan angama-200-300/ton emabangeni ahlukene).
Vele, ukuthengwa okunjalo kuzozenza kube nezinkinga eziningi ekukhetheni umhlinzeki ongcono kakhulu wenqwaba, kumoshe isikhathi esiningi.Ngakho-ke abanye abathengisi bangase bakhokhise imali ethile yokukhetha kanye nemali yokulahlekelwa kwensimbi, vele, izigayo ezinkulu zensimbi akufanele zikwenze.
Ngakolunye uhlangothi, awudingi ukukhokha izithakazelo ze-silicon steel roll entsha egoqelwe ngokubanda, lokhu kuzokhanga amabhizinisi amancane okukhiqiza umshini ophakathi nendawo.Babengamadoda okuqala, bacabanga ukuthi ikhwalithi entsha yangaphakathi eqinisekisiwe ngokuyisisekelo enezela umthamo, kuphela ohlotsheni lwepuleti, ikakhulukazi ipuleti elimpofu lingase libe namaphutha, kodwa liyi-punch evamile, isinyathelo sonyawo olulodwa, igijima ucezu, ingakwazi ukujwayela ucezu olusikiwe. Ukunikezela ngepuleti kubi, amanani aphansi, asikho isaphulelo futhi ababhali bangasebenza kahle..